Ngaba i-Cytomel / T3 Uncedo malunga nokuLahla kwesisindo? | I-AASraw I-Fat ilahlekile i powder
Ngaba i-Cytomel / T3 Uncedo malunga nokuLahla kwesisindo?
/Blog/Cytomel / T3/Ngaba i-Cytomel / T3 Uncedo malunga nokuLahla kwesisindo?
ezaposwa ngomhla 12 / 23 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Cytomel / T3.
1.Yintoni iCytomel / T3? 2.I-Cytomel isebenza njani?
3.Cytomel UkuLungiswa koMzimba 4.Iziphumo zeCytomel
Umlinganiselo we5.Cytomel 6.Iziphumo zeCytomel
1. Yintoni i Cytomel / T3?
I-Cytomel yinto echaphazelekayo yegama lomenzi i-hormone ye-thyroid ye-thyroidronine. Lo ngumfanekiso ogqityiweyo we-thyroid okhiqizwa i-hormone triiodothyronine, okanye yintoni ebizwa ngokuba yi-T3 hormone. Nangona i-Cytomel yokwenziwa yenziwe ikhona kwi-1950, i-hormone ye-thyroid kuquka ne-T3 isetyenziswe ngamayeza ukusuka kwi-1890. Izicwangciso zonyango lwe-thyroid zasekuqaleni zazingekho iifom zezilwanyana ezicocekileyo kwaye ziqulethe iifom e-T3 ne-T4.
Ama hormone e-thyroid afunyenwe awuncedo kwizicwangciso zokonyango, ngokukodwa ekunyangeni kwe-hypothyroidism. Le yimeko apho i-thyroid ingasakwazi ukuvelisa i-hormone ye-thyroid eyaneleyo, engakhokelela ekuzuzeni ubunzima, ukulahleka kwamandla, ukulahleka kweenwele kunye nokutshintsha kwindlela ekubonakala ngayo kunye nokwakhiwa kwesikhumba. Ngokuqaliswa kweCytomel, imodeli yokwenziwa kwe-hormone ye-T3, oku kuye kwabonelela i-hormone ekhuselekileyo kunye ne-hymn for such treatments.
I-Cytomel ayiyena kuphela i-hormone ye-thyroid etholakalayo. I-T4 hormone, Levothyroxine Sodium iyafumaneka kwakhona phantsi kwegama lezorhwebo ngokuqhelekileyo. Zombini i-T3 ne-T4 zifana nhlobo kwimvelo; nangona kunjalo, i-T3 ithathwa njengexesha le-4-5 elinamandla kune-T4. I-T4, ngokwemiqathango elula, isebenza njengendawo yokugcinwa kwe-T3, eyenza inguqulo yeCytomel ibe namandla kunamabindi ama-hormone e-thyroid. Nangona bobabini bephumelele ekuphatheni i-hypothyroidism, i-Cytomel iyona khetho ekhethiweyo ye-thyroid phakathi kwabadlali abaphuculisayo. Abasebenzisi be-Anabolic steroid basebenzisa iCytomel ngomgudu wokulahlekelwa ngamafutha omzimba.
2. I-Cytomel isebenza njani?
I-thyroid gland ithatha iodine kwaye iguqula yona i-hormone ye-thyroid T4 (thyroxine) kunye ne-T3. Kuyathakazelisa ukuba nganye iseli enye emzimbeni womntu ixhomekeke kwii-hormone ze-thyroid T4 kunye ne-T3 ngokumisela ukusetyenziswa kwe-metabolism. Ngenxa yoko, ndiyathemba ukuba unokubona apho i-cytomel yokuncedisa ingaba khona ekulahlekeni kwesisindo. I-T3 iphindwe kabini amandla ka-T4, kodwa phantsi kweemeko eziqhelekileyo i-thyroid gland ivelisa kuphela nge-20% T3 kunye ne-80% T4.
Njengama-hormone amaninzi emzimbeni, i-thyroid gland ilawulwa yi-pituitary gland, kwaye xa ivala ukunganelanga kwe-hormone ye-thyroid, iya kubeka i-thyroid ekhuthaza i-hormone (TSH), evuselela izithobe ze-thyroid ukunyusa i-T4 ne-T3. Gcina ukhumbule ukuba umzimba unomdla kakhulu kwiinguqu zee caloric, ngoko emva kokulandela ukunciphisa i-calorie yokutya ixesha elide, i-pituitary gland iya kunciphisa amazinga e-TSH, okuphumela ekuhlaleni kwe-hormone ye-thyroid emzimbeni. Le nxalenye yesizathu sokuba kutheni i-dieters ininzi ibetha i-plateau ekudleni kwayo, nangona kungenzi utshintsho kwindlela yokutya okanye inkqubo yokuqeqesha.
3. Cytomel Ukuhla ukusinda
Xa ukudla ixesha elide ixesha umzimba uya kunciphisa ukuveliswa kwehomoni ye-thyroid, ekubeni imizimba yethu iya kuba yindlela yokuphila. Le nto yinto eqiqweni ngokufanelekileyo ngenxa yokudla kwekhalori ephantsi ekubhekiselele kwindoda yokuqala ukuba indlala yayisondela kwaye umzimba uya kunqanda ukuvelisa i-hormone ye-thyroid njengendlela yokukhusela indlala.
Ngoko ke, ukuxhaswa nge-cytomel xa ukutya ukutya kuya kugcina amanqanaba e-thyroid emzimbeni kwinqanaba lokuqala, ngoko kuya kuthintela ukuncipha okubangelwa ukungabikho kwekhalori. Le ndlela yindlela yokusebenzisa i-cytomel. Ukongezelela, ukuxhaswa nge-cytomel kumayeza angaphaya kwemveliso yemvelo iya kunika umntu omnye umgangatho wesiseko semethamo. Njengoko uyakubona, le ndlela yindlela enobudlova, kodwa isasebenza.
4. Iimpembelelo zeCytomel
The iziphumo zeCytomel ngokuqhelekileyo kuyafana nokuba yintoni injongo yokusetyenziswa, ukunyanga i-hypothyroidism okanye ukuphucula ukulahlekelwa kweoli kwimeko yokusebenza. Kuzo zombini iziganeko, i-hormone isebenza ngokufanayo ne-replica ecacileyo ye-T3 hormone. Kungakhathaliseki isizathu sokuqala sokusetyenziswa, bobabini abantu kufuneka bakwazi ukunandipha ilahleko. Isigulane se-hypothyroidism ngoku kufuneka sibe ne-metabolism esebenza ngokufanelekileyo, eya kubanceda balahlekelwe ngamafutha. Ngokuqhelekileyo oku kwamkelwa njengokuba umntu ubeka ngokuthe ngqo kwixabiso elifanelekileyo leoli ngenxa yengxaki ye-thyroid. Ngenxa yentsebenzo engqondweni, ukulahlekelwa kwakhona kwento enokuthi ilahlekelwe yinto ekhawulezayo.
Kungakhathaliseki isizathu esithile sokusebenzisa iCytomel, ngelixa liza kuphucula umlinganiselo wokunciphisa umzimba uya kusadinga ukutya. Ukuze ulahlekelwe ngamafutha omzimba kufuneka utshise iikhalori ezingaphezulu kunokuba uzidle. Ukuba udla ngaphezu kokutshisa yonke i-Cytomel ehlabathini akuyi kuyenza nantoni na. Nangona kunjalo, kwimeko yokusebenza kunye nomntu ovele evelise iimali ezaneleyo ze-T3, unokufumanisa ukuba unako ukugcina i-caloric ingeniso yakhe encinci kunokuba ayengenayo kwaye aqhubeke esweleka. Ngenxa yokusetyenziswa kweCytomel, isantya-apho iikhalori zitshiswa ngoku ziphuculwe ngenxa yokulawulwa kwehomoni ye-T3.
Abanye baye bafumanisa ukuba ukusetyenziswa kweCytomel kunokuba luncedo xa usebenzisa iHumm Growth Hormone (HGH), ngakumbi xa usebenzisa i-HGH ephezulu. Olunye ulwazi luye lwabonisa ukuba ukusetyenziswa kweHGH kumazinga aphezulu kunokunciphisa ukuveliswa kwemvelo kwe-T3. Asikwazi ukubiza ukuxhaswa okunjalo kwe-Cytomel, kodwa kubonakala ngathi kunemeko ethile. Kungakhathaliseki, ngaphandle kombuzo umntu osebenzisa iCytomel kunye neHGH kwisicwangciso sokulahlekelwa kwexabiso elilahlekileyo uya kulahlekelwa ngamaninzi omzimba kwizinga eliphezulu kakhulu. Oku kubangelwa yiHGH ethwala iipropati ezinkulu zokuphucula izixhobo. Ukuba umntu ngokubanzi uquka i-beta-2 stimulant efana ne-Clenbuterol, uya kuba ngumatshini oshisayo.
Umphumo wokugqibela weCytomel ujikeleze nge-anabolic. Abanye baye bacetyiswa ukuba iCytomel ithatha inzuzo ye-anabolic ngokuphucula isenzo se-anabolic se-anabolic steroids. Ingcamango kukuba i-anabolic steroids inikezela kakhulu ukusebenzisa i-carbohydrates, amafutha kunye nama-proteins, kwaye njengoko kuthethwa ngayo iCytomel ikhuthaza ukusetyenziswa kwesondlo sezondlo. Ukudibanisa, kwinqanaba le nto kunokukhuthaza ukuphuculiswa okukhulu komzimba wonke. Nangona kunjalo, ngelixa le ngqungquthela ikhona kwaye ithathwa njengento eyenziwa ngabanye abadlali abaphuculisayo, abanakho ukuthembeka okuninzi. Uninzi luya kufumana lufanele luthembele kwiCytomel ngenjongo yalo ngqo.
5. Umthamo weCytomel
Ngenjongo yokwelapha i-hypothyroidism, Amanani e-Cytomel Kuya kuqhelana ukuqala kwi-25mcg ngosuku. Emva kweeveki ezimbalwa zokusetyenziswa, amanqanaba ngokuqhelekileyo ahlaziywa kwaye i-dose inganyuswa ngu-25mcg. Umthamo ungaphinda unyuselwe kwi-75mcg ngosuku ngezinye iiveki ezimbini emva koko kufikeleleke ukulungiswa kwezinga lokugcina. I-25-75mcg ngosuku iya kuba ngumyinge kunye nabaninzi bafumana i-25-50mcg ngosuku ukuba yiyo yonke into efunekayo. Kungakhathaliseki ukuba i-dose, i-dose yemihla ngemihla ingathathwa kanye ngosuku.
Kwimeko yokusebenza, ii-cytomel izifo ziya kufana kakhulu nezicwangciso zonyango lwe-hypothyroidism. Umntu uya kuqalisa ngokuqala nge-25mcg ngosuku kwaye akhulise umthamo we-12.5-25mcg onke kwiiveki ze-2-4 njengoko kufuneka. Abaninzi bayakufumana abayi kuba nesidingo sokuhamba ngaphezu kwe-75-100mcg ngosuku, kunye ne-125mcg kwibanga lelanga elwamkelekileyo kwixesha elifutshane kakhulu. Iqondo elinjalo eliphezulu liyakwamkeleka ekupheleni kokutya kokuncintisana ngokukhawuleza kodwa akufanele kube yimizi eqhelekileyo ngokuxhamla kokutya. Ngokumalunga nokusetyenziswa ngokupheleleyo, iiveki ze-6-8 ziya kuba lixesha elikhuselekileyo lilonke. Ixesha elide liyakwamkeleka, njengee-8-12 iiveki, kodwa yandisa ingozi yokuxhomekeka kwe-thyroid.
Nangona kunjalo, abantu abadala abadala abanempilo akufanele bafumane umba. Emva kokuba ufikelele ekugqibeleni umthamo wakho wokugqibela kwaye ixesha lokuphuma, ukhuthazwa ukuba ushiye umthamo ukuya kwi-25mcg ngosuku kwaye ubambe kule dosi kwiintsuku ze-7-10. Oku kuya kuvumela umzimba ukuba uhlengahlengise kwaye ukhusele ukuba ungangeni kwi-hypothyroidism. Akukho sizathu sokuba unqamle ukusetyenziswa ngokukhawuleza, i-dose ye-7-10 ephantsi efunekayo.
6. Iimpembelelo ezingasemva zeCytomel
I-Cytomel ngokuqhelekileyo ibonwa njengehomoni ebekezeleleke kakhulu kubantu abadala abanempilo; enempilo ngaphandle kwe-hypothyroidism. I nemiphumo emibi yeCytomel zixhaphake ngokuqhelekileyo kunye nokugqithiswa kwe-hormone ephakamileyo, kodwa ubuhlobo bomntu abukwazi ukulawulwa njengokuba udlala indima. Iziphumo ezichaphazelekayo zeCytomel ziquka:
Amanani aphakamileyo kakhulu okanye ukugqithiswa kwe-hormone ye-T3 nako kunokukhokelela kwiimeko ezinzima. Iziphumo ezibi zeCytomel kule candelo ziquka:
Ukunqongophala kweNtliziyo yeCrows
I-Cytomel ngokuqhelekileyo yipilisi ye-thyroid ekhuselekileyo, kodwa ukusetyenziswa kakubi, i-dose ephakamileyo ngokukhawuleza ixesha elide lingasongela ubomi.
Impembelelo yokugqibela yeCytomel efuna ukuxoxwa kukukhuthaza i-hypothyroidism. Uninzi ukwesaba ukusebenzisa le hormone ngenxa yengcamango yokuba imeko ye-hypothyroidism eyenzekayo emva kokuba isetyenzisiwe isetyenzisiwe. Ingcamango kukuba xa kusetyenziswe ukuphela komzimba awuyi kuvelisa ngokwaneleyo ngokwaneleyo i-T3 kunye ne-fat fat gain. Ngelixa kunokwenzeka ukuba ube ngumxhomekeke, akunakwenzeka kakhulu ukusetyenziswa okufanelekileyo. Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kungekhona kuphela ukujikeleza ukulandelwa kwexesha kunye nobude bokusetyenziswa, kodwa ngokukodwa ukuyeka ukusetyenziswa. Ukusetyenziswa akufanelekanga ngokukhawuleza. Endaweni yoko, umntu kufuneka ahlawule kwinqanaba lokugcina ixesha elifutshane ukwenzela ukuba avumele i-thyroid ukuba ibuyele kwakhona. Ngomntu onempilo ongazange asebenzise kakubi iKytomel, ukubuyiswa akufanele kube yinkinga.
Endaweni yokucinga ngeCytomel vs Synthroid Ndifuna ukuba uzicinge njengombini odibeneyo.
Abanye abantu bayazuza kwiCytomel kuphela (kwizinga eliphezulu), kodwa abantu abaninzi benza kakuhle ngokudibanisa ne-T4 ne-T3.
Oko kuthetha ukungongeza i-Cytomel kwiqondo lakho langoku le-Levothyroxine okanye i-Synthroid.
Xa kuziwa kumandla, iCytomel ngokuqinisekileyo i-STRONGER kune-Levothyroxine.
Unako ukufumana iDktetel yakho ukuba ifike i-Cytomel kwi-dose yakho yangoku ye-T4 kunokuba ufune ukuba uguqulele kwi-T3 kuphela.
Ngaloo nto engqondweni mhlawumbi kungcono ukugxila kumlinganiselo ofunekayo ukuba ulahlekelwe ngumzimba kwaye uzive ungcono.
Ngenxa yale nto ndiyincoma ukudubula ngomlinganiselo we-80 / 20 we-T4: T3.
Ukuba uthabatha i-100mcg ye-T4 ufuna ukuhamba nge-20mcg ye-T3.
Ukwengeza nje i-T3 kwi dose yakho ekhoyo ye-T4 inokuphucula iimpawu zakho jikelele ngokunceda ukuqhuba i-Reverse T3 kumanqanaba kwaye ngokusebenza ngokuthe ngqo kwimiyalezo yeselula.
I-Primobolan - i-steroid yokusika kakhulu	Kufuneka uyazi amaqiniso ngaphambi kokuba uthathe i-sildenafil citrate powder